Moments Neshamwari 23
Mune zvipi zvinyorwa zvinokosha izvo nyika yepasi inopesana nemweya? Aya mazwi anowanzoshandiswa zvakasiyana-siyana mumabhuku nemagazini anobata nyaya idzi, uye kushandiswa uku kunogona kukanganisa pfungwa ye muverengi.
"Astral world" uye "zvemweya" haasi mazwi akafanana. Ivo havagone kushandiswa kudaro nouno unoziva nyaya. Iyo nyika yeastral ndiyo nyika inofungidzirwa. Mariri nyika yezvepanyika uye zvese zvinoitwa munyama zvinoratidzwa, uye mukati mezvemagineti zvinoratidzirwawo mifungo yenyika yepfungwa, uye, kuburikidza nenyika yepfungwa, mazano epanyika yemweya. Nyika yemweya ndiyo nzvimbo iyo zvinhu zvese zvinozivikanwa kuva sezvairi, hapana unyengeri hunogona kuitwa pane avo vanhu vanogara nehana mukati mazvo. Nyika yemweya ndiyo nzvimbo iyo maanopinda, haawani nyonganiso, asi anoziva uye anozivikanwa. Unhu hunosiyanisa hwenyika mbiri chishuvo uye ruzivo. Chido isimba rinotonga mune nyika yeastral. Kuziva ndiyo nheyo yekutonga mune yemweya. Nzvimbo dzinogara mhuka dzesango semhuka dzinogara munyama. Vanosundwa uye vanotungamirirwa nechido. Vamwe zvisikwa vanogara munyika yemweya uye vanofambiswa nezivo. Nyangwe mumwe achivhiringika uye asina chokwadi nezvechinhu chaasinga funge kuti "anofunga zvemweya," kunyangwe zvakadaro zvingangoita kuti ave wepfungwa. Mumwe anogona kupinda munyika yemweya yeruzivo ari mune isina chokwadi mamiriro epfungwa nezvazvo. Haangodi kuva, kana kungofungidzira, kana kutenda, kana kufunga kuti anoziva. Kana achiziva nyika yemweya uzive naye kwete kufungidzira. Musiyano uripo pakati penyika yemashura nenyika yemweya musiyano uripo pakati peshungu neruzivo.
Nhengo imwe neimwe yomuviri inhengo yakangwara here kana inoita iyo inoshanda kwayo pakarepo?
Hakuna nhengo mumuviri yakangwara kunyangwe nhengo imwe neimwe inoziva. Yese organic organisation iri munyika inofanira kuziva kana iine chero inoshanda basa. Dai kwainge kusiri kuziva nezvekuita kwayo kwaisakwanisa kuzviita. Asi nhengo haina huchenjeri kana nehungwaru inoreva chiumbwa nepfungwa. Neruzivo tinoreva kuve munhu angave akakwirira, asi asiri akadzika, kupfuura mamiriro emunhu. Nhengo dzomuviri hadzina kungwara, asi dzinoita pasi pehungwaru hunotungamira. Nhengo imwe neimwe mumuviri inotongwa nechisungo chiri kuziva basa reiyo nhengo. Nekuziva ichi chiitwa chinokonzeresa masero nemamolekyu nemaatomu izvo zvinoumba, kupa basa muchiitiko cheuyo. Atomu yega yega ichipinda mukugadzirwa kwea molecule inotongwa neiyo inoziva chiitiko chemorekuru. Molekyamu imwe neimwe inopinda mukuumbwa kwesero inodzorwa nekumanikidza kwesero. Sero rega rega rinogadzira chimiro cheiyo nhengo rinotungamirwa neiyo organic inoziva nhengo, uye chikamu chimwe nechimwe sechikamu chikamu chesangano remuviri chinotongwa neyekuziva inoronga maitiro ekuumba ayo anotonga sangano remuviri wese. Atomu, mamorekuru, sero, nhengo ndiyo yega yega inoziva mune imwe nhanho yekuita. Asi hapana chimwe cheizvi chinogona kunzi chakangwara kunyangwe ivo vachiita basa ravo muminda yavo yekuita dzakasiyana neyemakanika zvakaringana.
Kana imwe nhengo kana chikamu chemuviri wenyama kuchimiridzirwa mupfungwa, saka nei munhu asina maturo asina kurasikirwa nekushandiswa kwemuviri wake apo iye arasikirwa nekushandiswa kwepfungwa dzake?
Pfungwa dzine mabasa manomwe, asi muviri une huwandu hwemitezo. Naizvozvo, hadzi imwe neimwe nhengo inogona kumiririra kana kumiririrwa neimwe basa repfungwa. Nhengo dzomuviri dzinogona kukamurwa muzvikamu zvakawanda. Kupatsanura kwekutanga kunogona kuitwa nekusiyanisa nhengo idzo dzine, sebasa ravo rekutanga kuchengetedza uye kuchengetedza muviri. Pakati peizvozvi zvinouya kutanga nhengo idzo dzakabatanidzwa mukugaya uye kubatwa. Nhengo idzi, dzakadai sedumbu, chiropa, itsvo nemhezi zviri mudumbu remuviri. Inotevera ndeaya ari mu thoracic cavity, moyo nemapapu, ane chekuita ne oxygenation uye kucheneswa kweropa. Nhengo idzi dzinoita zvisina basa uye pasina kudzora kwepfungwa. Pakati pezvinhu zvakabatana nepfungwa zvinonyanya kuve nhengo yemuviri uye pineal gland uye zvimwe zvinhu zvemukati zveuropi. Munhu anenge arasikirwa nekushandiswa kwepfungwa yake, senge inyaya yechokwadi, anozoonekwa kana aongororwa kuti humwe nhengo idzi dzakakanganiswa. Kupenga kunogona kunge kuri nekuda kwechimwe kana zvakawanda zvikonzero. Dzimwe nguva chikonzero chaicho chiri chemuviri chete, kana chingave chiri nekuda kwechimwe chimiro chepfungwa, kana kupenga kungave kuri nekuda kwepfungwa ichisiiwa zvachose uye yabva pamunhu. Kupenga kunogona kuunzwa nechimwe chikonzero chemuviri, sechirwere cheimwe yemukati mepfungwa, kana nenjodzi kana kurasikirwa kwechirwere chegodo. Kana chero nhengo iyo yakabatana nepfungwa, kana iyo kuburikidza iyo iyo iyo pfungwa inoshanda mumuviri wemuviri, ikarasika kana kuita kwavo kuchikanganiswa nako, ipfungwa haigoni kuita zvakananga pamusoro uye kuburikidza nemuviri wenyama, kunyange ichigona kunge yakabatana nayo . Pfungwa dzinozoita sekunge bhasiketi ane muchina warasikirwa nezvakadzika, uye kunyangwe pariri, haakwanisi kuchiita. Kana kuti pfungwa dzinga kufananidzwa nomutasvi akasungwa bhiza rake, asi maoko nemakumbo zvakasungwa uye muromo wake wakasungwa kuti atadza kutungamira mhuka. Nekuda kwekuda kana kurasikirwa kwechimwe chikamu chemuviri icho chinoita pfungwa kana chinodzora muviri, pfungwa dzinogona kunge dzichisangana nemuviri asi dzisingakwanise kuhutungamira.